Solomọn Bụ: Nkọwa ọhụrụ nke njem nlegharị anya Solomons
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Solomọn Bụ: Nkọwa ọhụrụ nke njem nlegharị anya Solomons
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Solomon Islands • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Na ihe na-anọchi anya "mgbanwe ala" na ntuziaka maka ire ahịa ahịa Solomon Islands, Vislọ Ọrụ Ọbịa nke Solomon Islands egosipụtala ụdị ọhụụ ya bụ "Solomon Is." akara.
Otu ihe dị mkpa nke mbupute ọhụụ na-ahụ ka a na-akpọzi Solomon Islands Visitors Bureau “njem njem Solomons” na njirimara NTO maara nke ọma, aha agwaetiti na nke osimiri jiri akara ọhụrụ gosipụtara nke ụgbọ mmiri mmiri nke Solomon Islands ndị mara mma.
N'ịkọwa mkpa njem nleta dị ka onye na-ahụ maka akụ na ụba mba ahụ, Mịnịsta ala Solomon Islands, Hon. Rick Hou jiri aka ya gosipụta akara ngosi ọhụụ ọhụụ na mmemme emere na Honiara's Solomon Kitano Mendana Hotel.
N'ịkọwa atụmatụ ahụ dị ka "mgbanwe mgbanwe nke ala" na ntụzịaka ahịa azụmaahịa mba ụwa, onye isi oche njem nleta Solomons, Josefa "Jo" Tuamoto kwuru na e mepụtara ụdị aha "Solomon Is" ka ọ bụrụ ihe dị iche iche, na-ekpuchi ebe ọ bụla ebe ọtụtụ ụzọ na-enye. nke mere ka Hapi Isles ndị a dị iche na ndị agbata obi South Pacific.
“Obi siri anyị ike na akara ngosi ọhụụ ga - egosi njirimara, ozi, onyonyo ya na ọnọdụ ya, ọ ga - enye usoro ikpo okwu maka Solomon Islands ka ọ bụrụ nke kacha mma n’ahịa mba ọzọ n’afọ iri ma ọ bụ karịa,” ka Mr Tuamoto kwuru.
“Mma nke ohuru ohuru a na - enye anyi ohere itinye ihe‘ Solomons Is. ’ akara mkpado banyere ihe ọ bụla - bụrụ mmụọ, omume, aha ma ọ bụ nkọwaa - anyị nwekwara ike jikọọ ya ọnụ iji wepụta ọnọdụ aha mmadụ dị ka di na nwunye, ndị na-eme njem ezumike a, ezinụlọ, wdg.
“Ọhụrụ anyị branding bụ ihe pụrụ iche. Ọ na-enye onye ọbịa ọ bụla ohere ịkọ ma ọ bụ tinye aka na ahụmịhe njem ha, dịka ha chọrọ ka ọ bụrụ, n'ime usoro a na-eme ka ọ bụrụ nke ha na iche na Solomon Islands.
“Mbupute nke a bụ maka imetụ aka - imetụ ihe ndị mere n’oge gara aga site na ọtụtụ ụdị ndụ ọdịnala na akara ngosi ọdịnala nke na -adịghị ihe ọ bụla maka mmepe obodo na azụmahịa nke ọtụtụ mmadụ.
“Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ịhụ mba n'anya, ọpụrụiche, ọ dị mfe ịgbaso ma dịkwa ọnụ ahịa.
“N’ebe a ka ọ na-enyocha akara ọ bụla na ọkwa a nke mgbanwe mgbanwe njem nlegharị anya nke Solomon Islands na atụmatụ a ga-agbanwe dị ka ụlọ ọrụ na-agbanwe.
"N'agbanyeghị etu ebe njedebe njem a siri pụta, ahịa a gbasakwara, 'Sọlọmọn Bụ.' bụzi ika.
"Anyị emeela njem ahụ ka ọ gbanwee wee bụrụ ihe ziri ezi."
Atụmatụ maka usoro ọhụụ anatala nnabata nke 100 pasent site na kọmịshọn gọọmentị nke Solomon Islands nke enyerela ọhụụ ọhụrụ nke izu gara aga.